လက်တွဲဖော်သို့ (၁၃) စောင်မြောက်သ၀ဏ်လွှာ
သွားချင်ရာသွား ဖ၀ါးခြေထပ် လိုက်ဖို့ရယ်ပြင်… သူ့ရင်ခွင်။
ဒီလမ်းကို ဒီတက်နဲ့ ဟိုကွေ့မှာ တချက်လှမ်းခဲ့ပါ့
လွမ်းတလို့ သူမျှော်ရည် ရှေ့ဆောင်ခဲ့ပြီ…
ဒီလူက ဒီလိုအကြောင်း ..
တွေးဆကာ ပူပန်တတ်ပုံ… နဲ့
ခေါင်းမာမာ ကိုယ့်စရိုက်ရယ်က … တွေ့ကြုံပုံဆန်း။
ပန်းမွေ့ယာ ရွှေကော်ဇောကိုတော့ တွေ့ရမယ် မရည်မှန်းနဲ့..
ကမ်းရှိပေမယ့် ဝေးနေသလို ….
အဖော်ပြုကာပဲ… လက်တွဲကို ခိုင်ခိုင်ကျည်လို့..
သစ္စာဆို … ဒီသောင်ကမ်းကို ..
သံယောဇဉ် နောက်တိုးတွဲပါလို့ ….
ဖ၀ါးခြေထပ် လိုက်ခဲ့မယ်။ ။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:11 PM
ကြွေ တယ် ကွား)
၁၃ နှစ်မြောက် မှ သည်---- အလီလီ
ချစ်သော အကိုကြီး အမကြီးတို့ ၁၃ နှစ်ပြည့်မှ နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာထိ ကြင်၂ နာ၂ ယု၂ယ၂ ပိုချစ်နိုင်ကြပါစေသတည်းး)
အမရေ .. တကယ် ဒီကဗျာလေးဖတ်ပြီး ၀ိုင်း ကြည်နူးပေးတယ်ဂျ ။ အမရဲ့ လက်တွဲဖော်က ပြောထားတယ်နော် .. ၁၃ နှစ်ပြည့်အတွက် ဘာစားမတုန်းတဲ့ ။ ဟိုတခေါက်တုန်းက မစားလိုက်ရတဲ့ ထမင်းနှဲ စားချင်သဗျ ။ နောက်တခေါက်လာရင် ဖြစ်အောင် လုပ်ကျွေးကြပါဂျး)
အကြိမ် ၁၃၀ တိုင်တိုင်
သားရွှေအိုးထမ်းလာတာကို မြင်လိုပါတယ် ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းမျိုး ဆုတောင်းရရင်….
အခု ၁၃ နှစ်မြောက်ဆိုတော့ ၁၅နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ရောက်ရင် ကျနော်တို့မြန်မာဘလော့ဂါအားလုံး မခင်မင်းဇော်တို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ နှစ်ပတ်လည် ဆွမ်းကျွေးအလှူထမင်းကို ပုသိမ်မှာ လာရောက် စားခွင့်ကြုံပါရစေ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွေးမယ်မို့လား။း-) ကျနော်က အစားကြီးပေမယ့် ပုသိမ်က ဆန်အိုးကြီးဆိုတော့ အိုကေမှာပါ။
ကေ၊ ဂျစ်၊ ကိုအောင်သာငယ်၊ ကိုပေါ..
၁၅ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ကို မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စုံစုံလင်လင်နဲ့
အစ်မတို့ ဇနီးမောင်နှံအတွက် ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာကို အစ်မပြောသလို မိတ်ဆွေများနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်တဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေနော်..
၁၃နှစ်တောင် ရှိပြီ။ မိုက်မှ မိုက်ပဲ။
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ဂွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေပဲ ကြုံဆုံနှင်ပါစေ။
ဒီကဗျာ ဖတ်ပြီး ဖြစ်နေမယ့် အကို့ မျက်နှာကို မြင်ယောင်နေမိတယ်.. နောင်လာမယ့် နှစ်ပတ်လည်ပေါင်း များစွာကို အမ ချစ်တဲ့ မြေမှာ အမ ချစ်တဲ့ လူတွေ စုံစုံညီညီ နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကျင်းပ နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးပါတယ်နော့